मनोरंजन – Online Khabar 24
Oct222021 by admin adminNo Comments
नेपाली फिल्ममा सुनिल सेट्टी अनुबन्धित, लिनेछन् यति धेरै पारिश्रमिक !
पुरा खबर, लामो समय देखि बलिउडका चर्चित अभिनेता सुनील सेट्टीले नेपाली चलचित्र खेल्ने कुरा चर्चामा थियो । तर अब भने उनलाई चलचित्रमा अनुबन्ध गरिएको छ । सुनिलले अब नेपाली फिल्म खेल्ने पक्का भएको छ । चलचित्र एक्स नाईनमा सेट्टीलाई अनुबन्धन गरिएको निर्देशकले पुष्टि गरेका छन् । फिल्मका निर्देशक मुकुन्द भट्टले सो कुराको पुष्टि गरेका हुन् । निर्देशक भट्ट र सुनिलको सामुहिक तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको छ । ‘सुनील सेट्टीले नेपाली फिल्म खेल्ने टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै फिल्मको विभिन्न विषयमा जानकारी गराइनेछ ।’ नेपाली भूमिमा स्वागत गर्दै निर्देशक भट्टले सेट्टीलाई भने, ‘तपाईंसँग काम गर्न पाउँदा खुशी छु ।’ स्रोतअनुसार चलचित्र निर्माण टिमले सेट्टीलाई छोटो भूमिकाका लागि १ करोड भारतीय रुपैयामा सम्झौता गरेको खुलेको छ । तर निर्माण पक्षले पारिश्रमिकको कुरा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्द...
१५ मिनेटको समय, बीचमा सिसाको भित्तो, रूदै शाहरुख खानले यसरी भेटे छोरालाई !
काठमाडौं। शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान मुम्बइ क्रु'ज ड्र'ग्स पार्टी केसमा समस्या'को सामना गरिरहेका छन् । २० अक्टोबरमा सेसन कोर्टले उनको ज'मानतको अर्जी खा'रेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि आर्यन र उनको परिवारको चि'न्ता बढेको छ । छोरा आर्यनलाई बचाउन प्रयासरत पिता शाहरुख खानले पनि निकै कठि'नाइको सामना गरिरहेका छन् । शाहरुख बिहीबार छोरालाई भेट्नको लागि आर्थर रोड जे'ल पुगेका थिए । जे'लमा यसअघि कोरो'नाभाइ'रसका कारण सीधा अगाडि बसेर कुरा गर्न बन्द गरिएको थियो । बुधबार महाराष्ट्रका जेलहरुमा कैदीहरु र उनीहरुका परिवारलाई सामुन्ने बसेर कुरा गर्न लगाइएको प्र'तिब'न्ध हटाइएको थियो । प्र'तिबन्ध हटेसँगै शाहरुख छोरालाई भेट्न पुगेका थिए । आर्यन खान विगत १४ दिनदेखि आर्थर रोड जे'लमा छन् । यसअघि शाहरुखले भिडियो कलमार्फत छोरासँगै कुरा गर्न पाइरहेका थिए । २१ अक्टोबरमा आर्थरन रोड जे'ल गएर शाहरुखले छोरा आर्...
तन्नेरीहरूको दिल धड्काउने मन्त्रीकी छोरी सपनाका बोल्ड अवतार, हेरौं फोटो
तन्नेरीहरूको दिल धड्काउने मन्त्रीकी छोरी सपनाका बोल्ड अवतार, हेरौं फोटो-भिडियो बलिउडमा एउटी निकै हट एण्ड से-क्सी युवतीको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। उनी यति राम्री छन् की, उनलाई हेरेपछि हेरेको हेर्यै गर्न मन लाग्छ। भारतीय मिडिया लेख्छन्- उनी सन्नी लियोन भन्दा पनि धेरै का’मुक र बोल्ड देखिन्छन्। अहिले यी युवतीका तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक सेयर हुन्छन्। यी भारतीय हट युवतीको नाम हो, सपना व्यास पटेल। सपनाको जन्म सन् १९८९ मा भएको हो। यिनी फिटनेस ट्रेनर हुन्। सपना राजस्थान नजिकैको राज्य गुजरातका स्वास्थ्य मन्त्री जय नारायण व्यासकी सुपुत्री हुन्। अहिले सपनाले आफ्नो करियर मोडलिङ्गतर्फ पनि अगाडि बढाएकी छन्। त्यसैगरी उनले बलिउड फिल्महरुमा पनि एक फिटनेस ट्रेनरको रुपमा पनि काम गरिरहेकी छन्। पहिले सपनाको तौल ८६ केजी रहेको थियो। जुन तौल एक महिलाको लागि अत्याधिक धेरै मानिन्छ। उन...